Tenga Spotify Inotamba Yakachipa, $ 8 ye2000 Real Spotify Inotamba
Tenga Spotify Inotamba Yakachipa
Kuwana traction paSpotify hakusi nyore, kunyanya kwete kana uchangotanga kuishandisa uye usina runyorwa rukuru rwevateveri, zvisinei netarenda rauinaro. Tenga Spotify Inotamba zvakachipa uye rega vateveri vako vakubate ziso. Iva Spotify tanga nekusimudzira chimiro chako uye tora kutariswa kwezviuru zvevateereri. Uye nekufamba kwenguva, mabhiriyoni evateveri achatanga kupinda mukati. Rega vateereri vakawanda vauye kuprofile yako kuzoteerera izwi rako remashiripiti nekutenga mitambo paSpotify.
Iva nyeredzi yemimhanzi yerudzi rwako nekusarudza edu ekutanga-kirasi mapakeji ekupfura kumusoro kweanoridza pane chero rwiyo rwaunoda kusimudzira. Wanga uchinzwa wega wega nguva pfupi yapfuura nekuda kwekuti kana mashoma mitambo pane yako steams? Mira kunze kubva kuboka revanhu nekuwana iyo yakachipa Spotify inotamba mumazuva mashoma. Kuwana mimwe mitambo kumimhanzi yako hakuregi chete kuti utariswe nevateereri vako asi zvakare zvinokubatsira iwe kukwira kumusoro.
Haufarire kushanda pakombuta nguva dzese? Tenga Spotify Inotamba Yakachipa Pfuura Enda unoteerera uye tora akanakisa emasevhisi edu pane yako smartphone zvakare! Tora madanho epamusoro needu epamusoro-e-iyo-sevhisi sevhisi uye uzvichengete kure nechero donhwe mumitambo yese. Kunzwa usina kuchengeteka? Kuchengetedzwa kweakaundi yako ndiro redu rekutanga basa. Hatimbokumbira password yako kana rumwe ruzivo rwakanyanya - chatinongoda i URL yetraki yako.
Zvirongwa zvedu zvinosiyana zvichibva pahuwandu hwenhamba dzeMitambo yaunowana pane yako Spotify track - inotanga pa $ 4 uye inoenderera mberi sezvo mitambo ichiwedzera muhuwandu. Vanhu vanoedza kutsvaga kumusoro $ 1 chirongwa, asi hapana chakadai chinhu. Kuisa zvakasiyana, nei uchifunga zvirongwa zvakanaka kana tiine akanakisa iwo.
Nei ndichifanira kutenga Spotify Inotamba zvakachipa?
Uine mamirioni makumi maviri neshanu evashandisi vemwedzi nemamirioni makumi mana emitambo paSpotify, zvinonetsa kutora pfungwa dzevanhu kumumhanzi wako zvichibva pamhando yavari kudanana nayo. Asi kana iwe ukatenga mitambo paSpotify (pasina zvirongwa zvedu zvakachipa), haufanire kunetseka nezvekutamba mitambo nekuti tichakuitira izvo.
Zviri 100% zvakachengeteka kutenga Spotify Inotamba pa Sociic?
Kwete chete kuti yakachengeteka asi zvakare inovimbiswa kuti iwe unowana iyo yakafanana nhamba yekutamba sekuvimbiswa uye ivo vanogona kuwedzera asi havazombofa vakadonha. Isu tiri musika une mukurumbira wekugadzira iyo Spotify nzvimbo iri nani pane zvaunoda, ingave iri podcast kana yako mimhanzi trackso Tenga Spotify Inotamba Yakachipa.
Ndiani anoziva kuti ndatenga Spotify mitambo?
Hapana. Kuvanzika kwako ndiko kunetseka kwedu kukuru uye isu tinosungirwa kuzvikoshesa. Isu tinozvisimbisa kuti hapana anoziva kuti ndimi makatenga iyo Spotify inotamba.
Zviri kukurumidza here kutora mitambo pamateal Spotify angu?
Kuwana mitambo paSpotify ndicho chinhu chakaomesesa kuita, uye kuendesa kwayo nekukurumidza kunozorwadza mumutsipa. Asi, pa Sociic, tichaita shuwa kuti iwe unowana iko kutsva-nekukurumidza kuendesa kumaturu ako mushure meKutenga Spotify Inotamba Yakachipa.